Kwenzeka ukuthi emva uvuka, asikwazi ukukhumbula ukuthi thina waphupha amaphupho. ukuqaphela ngokugcwele amaphupho - into ezingavamile. Ikhono silondoloze unembeza ngesikhathi sokulala, futhi ushintshe inkambo ukugeleza kwalo alinikwa eziningi. Nokho, ikuvumela ukuba balahle okwakwenzeka futhi bagqugquzeleke, ngisho ebusuku. Kukhona izimiso ezimbalwa ezilula, eqondiswa ngalo ufunde ukulawula amaphupho ngisho ukushintsha iskripthi yabo.
1. Ngemva kokuvusa musa siphume embhedeni, futhi cwilisa amaminithi ambalwa, bese uzama ukukhumbula yini waphupha. Ukuze wenze lokhu, ungagcina idayari lapho uqopha zonke amaphupho. Kubalulekile ukuthi uzama ukukhumbula ngamunye izingxenye ubuthongo, wakuthwala wenyukela nakho leli phephandaba.
2. Yenza umkhuba ngezinye izikhathi ngicabange emini futhi musa ulala? Zama ukuzitshela wena ukuthi wena ezizungezile ngokoqobo - hhayi ukuthi abanye, njengoba okwamanje elinye futhi iphupho, futhi kungazelelwe ke athokozise, ungakwazi phusha ngisho ngokwami. Uyothola umangale, kodwa ekugcineni, futhi ebusuku uyozizwa ukuthi uyaqaphela ukuphupha kanye snovedeny.
3. Ngaphambi ekulaleni ukuziqinisekisa ukuthi ebusuku, wena ungakhohlwa ukubheka ezandleni zakhe. Le ndlela ezilula kodwa eziphumelelayo nemiphumela emangalisayo.
4. Zama ukumisa inkhulumomphendvulwano yangaphakathi. Down ngemicabango okungahleliwe ukuthi njalo ezingqubuzanayo ezaziyaluzisa ekhanda lami! Kuzoba kuyikhono ewusizo uma ufuna ukufunda indlela ukubona OS.
5. Okubona tabobunjwa weJiyomethri ngaphambi kokuba ngilale - eyodwa yezindlela, kanjani ukulawula amaphupho. Ekuseni, ngemuva kokuthi uvuke, ukubamba ukunaka yakho ezintweni ezibaluleke kakhulu ukulala. Imiphumela emihle futhi unika umzimba. Uma umzimba ziyokuwa ubuchopho elele ngokushesha, ngeke kube lula ukulawula konke okwenzekayo ngephupho.
imibono yakhe ihlukaniswe Harvard uprofesa wesayensi amasu zokuqapha ubuthongo Deirdre Barrett. Uveza okuthiwa rapid eye movement isigaba (noma geodatabase), futhi uveza ukuthi cishe kuphela esigabeni wobuthongo, lapho umsebenzi ubuchopho kuyafana lapho uphapheme. Kwakuphakathi nalesi sikhathi kukhona flash rhythmical e cortex cerebral, okuyinto siguqulelwa amaphupho. On umbuzo kanjani ukulawula amaphupho, uprofesa uthi lokhu kungenziwa kuphela ukufunda besebenzisa kwansuku ukuqeqeshwa Memory. Ngaphambi kokulala udinga zinike ukufakwa, okuyinto sifuna ukuba ngizihlole kusukela ngaphandle, njengoba kule movie. Njalo thina singabafakazi bakhe abaqondisi le ifilimu, futhi ngeke sikwazi ukushintsha zonke indawo izinhlamvu. Ngakho ungakwazi kalula ukuqeda obumnandi - ukuqaphela ukuthi iphupho - lokhu ngokwengxenye inqubo elawulwa.
Nokho, akubona bonke ngakho elula. Ezinye izazi zokusebenza kwengqondo, ososayensi bakholelwa ukuthi abantu abakwaziyo ukulawula amaphupho, enza umonakalo ongalungiseki nempilo yabo. Ngokombono wabo, ukuphupha zinengqondo ukugxambukela ubuthongo egcwele, ngoba uma usebenzisa ezifana amasu ingqondo isebenza ngaso umsebenzi wayo ezimatasa. Singasho ukuthi umuntu uzama iphazamise inqubo yemvelo, okuyinto wabunjwa phezu izigidi zeminyaka. Kodwa usazokwazi uvuke futhi uthole kude iphupho elibi noma okwakwenzeka at intando - kuyikhono ewusizo, futhi ukuqeqeshwa njalo ukuze uyifinyelele ngeke kube nzima.
Ushukela ebilisiwe: iresiphi ngesithombe